2 အဘို့ရလဒ် beyblade games
beyblade ဖို့ဒီစိန်ခေါ်မှု၌သငျခကျြမြားဂိုးသွင်းနှင့်အချို့သောအမြန် combo အနိုင်ရတူညီတဲ့အရောင်၏အစိတ်အပိုင်းများအုပ်စုများအပေါ်ကိုနှိပ်ပါမြန်ဆန်တိကျမှုဖြစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်သင်ထွက်ခေါက်နိုင်ပါတယ်အာရုံ၏တခဏပါပဲ။
အသီး Ninja ကိုစားဖိုမှူး
စားဖိုမှူးအသီး Ninja နာမည်ကြီးအသီးနင်ဂျာဂိမ်းတွေနဲ့တူညီတဲ့အမျိုးအစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အတူဂိမ်းအသစ်ကိုသင်ကစားရန်ပျော်စရာတစ်သဘောပေးသည်။
အဖုတ်ကောင်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးစီးရီးအတွက်တတိယရာပူဇော်သက္ကာအတွက်ပျော်စရာမဟာဗျူဟာနှင့်ဖုတ်ကောင်ဆိုအကုန်ကုန်တာ။ ဒီဗားရှင်းကြီးမားသောတိုးတက်မှုတတ်၏။ သာ. ကောင်း၏ဂရပ်ဖစ်နှင့်အသံ, ပိုတာဝါတိုင်, န့်အသတ်ကစားဘို့ options များနှင့်အများကြီးပို။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသကျောက်မျက်
လိုင်ခေါင်း၌ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ဆောင်အဖြစ်အတားအဆီး fly.Note ဖို့ပိုပြီးစွမ်းအင်ကိုရ Collections ကျောက်မျက်အားဖြင့်ဥမင်မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းကိုရှာဖွေဒေါသထွက်နေတဲ့ငှက်, သစ်ပင်များကိုကူညီပါ
Spiderman - ထိုမြို့ကိုကယ်တင်
အဆိုပါအစိမ်းရောင် goblin မိမိကိုမိမိပုံတူမျိုးပွားခဲ့သည်နှင့် goblin Clone အနိုင်ယူနှင့် 10 ကွဲပြားခြားနားသောလှိုင်းတံပိုးတလျှောက်အားလုံး dangers.Defeat အားလုံးအစိမ်းရောင်လူ့မှင်စာများအနေဖြင့်မြို့ကယ်ဖို့ကသူ့စူပါအင်အားကြီးတွေနဲ့ town.Help Spiderman တိုက်ခိုက်ရန် planing ဖြစ်ပါတယ်။ Getty အားဖြင့်ပိုပြီးမှတ်ရယူလိုက်ပါ
လောဘဝက်၏တစ်ဦးအုပ်စုဟာသူ့ရဲ့အစာခိုးယူဖို့ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့အိမျကိုသှားဖို့ချင်တယ်။ အခုတော့သူတို့ကကြောင်ရဲ့အိမျမှချီတက်ကြသည်။ အဆိုပါကြောင်ကအရမ်းဒေါသထွက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင်သည်၎င်း၏နေအိမ်နှင့်အစားအစာကာကွယ်ကူညီထံသို့လာကြ၏။ အပေါ်လာကြ, မြင့်မားရမှတ်ရ!
Santa vs အိုဘားမား
သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက် hit ရန်သင့် launcher ခွင့်ထောင့်နှင့်အာဏာပေးအဖြစ်သမ္မတအိုဘားမားသို့မဟုတ် Santa အဖြစ် Play ။
နွေရာသီသေးသွားပြီနှင့်ဒိုဟာစူးစမ်းရှာဖွေသူနေဆဲသွားရောက်သောနေရာများရှိပြီးမပေးပါ။ ယနေ့တွင်သူမတစ်ဦးသဲကမ်းခြေစူးစမ်းရန်သူမ၏အကြီးအသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားနေသည်။ သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ဘယ်လောက်ကောင်းသင်သည်တတ်နိုင်မောင်း, သင်လုပ်နိုင်အဖြစ်အများအပြားအချက်များစုဆောင်းဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။ ခံစားကြည့်ပါ!
biker လူရမ်းကားများ၏တိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါ။ သငျသညျတှနျ့ဆုတျလျှင်သူတို့သည်သင့်ကိုဆင်းခေါက်ပါလိမ့်မယ်ကြောင့်အသတ်အံ့သောငှါရိုက်ကူး။ ပထမတော့သငျသညျဤအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့သေနတ်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရသိရသည်ဆည်းပူးနိုင်ရန်အတွက်တိုးတက်စေနှင့်သင်သည်များစွာသောအချက်များကိုရရှိပါလိမ့်မယ်
Contra flash ကိုဂိမ်းဗားရှင်း
သင်တစ်ဦး retro ဂိမ်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင် em '' လွန်ခဲ့တဲ့လေးပုံတစ်ပုံရာစုပြန်လွတ်လာခဲ့ကွောငျး Arcade ဂိမ်း, Contra, တစ်ဦးအေးမြ 8-bit နဲ့ရိုက်ကူးတက်သိရကြလိမ့်မည်။ သငျသညျ Contra 25 နှစ်မြောက်၌ဤဖြစ်ရပ်အထိမ်းအမှတ်နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကယ်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ မစ်ရှင်အားလုံးအမြိုးမြိုးထှကျသုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်